Mbido AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Ụmụaka na-eto eto na-agba agba na akụkọ akụkọ na-abụghị eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye amara aha ya "Doo“. Anyị Declan Rice Childhood Akụkọ gbakwunyere akụkọ banyere Untold Biography Eziokwu na -ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ onye ọkpụkpọ nwere nnukwu ikike maka ọdịnihu. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akwụkwọ ndụ Declan Rice nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Declan Rice Childhood Akụkọ - Ndụ mbido na azụ ezinụlọ:
A mụrụ Declan Rice n'ụbọchị 14th nke Jenụwarị 1999 nna ya, Sean Rice, na nne Teresa Rice na London, United Kingdom.
Declan Riz bụ nke Irish na nke a pụrụ ịchọta site na ndị nna nna ya Irish, Margaret na Jack ndị si Douglas, bụ obodo dị na Cork, Ireland. N'okpuru ebe a bụ ndị na-agba ọsọ na nna ya mara mma, bụ Sean Rice.
N'ihi nne na nna ya ochie na n'ihi nne ya, Teresa, si Co Longford na Ireland, Declan kwenyere na ọ bụ ọgbọ nke abụọ Irish na Britain. Na nchịkọta, Declan dị ka mmadụ bụ Irish ma nwere obi ndị Britain.
Declan Rice tolitere na nne ya, papa ya, na ikekwe ọ nweghị nwanne ma ọ bụ nwanne na Kingston n'elu Thames. Dị ka nwatakịrị, mmetụta nke mmezu bịara mgbe ọ bụla bọọlụ dị n'ụkwụ ya. N'ezie, onyinye obere Declan rịọrọ bịara n'ụdị bọọlụ. Ọdịdị dị otú a maka egwuregwu mechara kwụọ ụgwọ.
Biography Declan Rice Biography - Ndụ Ndụ Mbụ:
Mmasị Declan nwere maka bọọlụ hụrụ ya na ndị ọhụrụ ọhụrụ debanyere aha n'akwụkwọ ndekọ agụmakwụkwọ Chelsea mgbe ọ nwesịrị ule gara nke ọma.
Ọ bụ otu n'ime ụmụ nwoke ole na ole agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ họpụtara n'oge asọmpi, oge Chelsea Billionaire Russia mezigharịrị, Roman Abramovich.
N'afọ ahụ 2006, tọrọ ntọala ntọala ọrụ Declan dị ka afọ asaa. Ọ bụ oge na-enye obi ụtọ maka ezinụlọ Rice bụ ndị hụrụ nwa ha ka ọ na-abanye na ogwe aka ntorobịa nke klọb nke onye pụrụ iche megharịrị ọhụrụ. Jose Mourinho.
Declan Rice Biography - Ụzọ ama ama:
Ndụ agụmakwụkwọ Chelsea FC adịghị mfe n'oge ahụ. N'ihi nke ahụ, ọ bụ naanị ụmụaka kacha sie ike lanarịrị agụmakwụkwọ. Dịka ndị egwuregwu agụmakwụkwọ ndị ọzọ, enweghị ntụkwasị obi bụ nnukwu nsogbu maka Declan Rice bụ onye hụrụ ndị otu ya ka ha na ya na -asọ mpi.
Ọ lụrụ ọgụ wee nweta ohere dị larịị nke na -enyere ya aka inwe ọganihu n'ọkwa dị elu. Declan nwere ọganihu site n'ọgbọ ruo n'ọkwa ruo mgbe ọ nwetara asọmpi na -agaghị echefu echefu nke Chelsea n'okpuru ndị otu 14.
Declan Rice so na ụmụaka ole na ole ndị ọzọ hụrụ onwe ha ka ha na-agbasi mbọ ike na gburugburu Chelsea FC gburugburu ebe ọ nọ n'okpuru afọ 14.
N'ụzọ dị mwute, ogbenye Declan enweghị ike ịnagide nrụgide ahụ ma nke a wetara nnukwu nsonaazụ. Ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Chelsea tọhapụrụ ya bụ onye hụrụ ya ka ọ bụrụ ihe karịrị ihe achọrọ.
N'afọ ahụ, 2014 bụ afọ Declan Rice chere ịda mbà n'obi ihu dị ka nwata na-eto eto football. Obi abụọ adịghị ya, ụmụaka ọ bụla na-eto eto nwere biri site na ịjụ agụmakwụkwọ ga-ama nke ọma ihe mgbu mmetụta uche miri emi na mmebi nke uche ọ nwere ike ibute. Nabil Fekir nwetakwara ụdị ihe ahụ.
N'agbanyeghị ịjụ agụmakwụkwọ Chelsea, mkpebi ka bụ okwu nche ya. N'otu afọ ahụ 2014, Academy nke West Ham United kpọrọ Declan maka ule. N'ime West Ham, Declan hụrụ na-eme ka obi ghara iru ya ala.
Biography Declan Rice Biography - Bilie na -ewu ewu:
Ndụ dị mma n'okporo ụzọ ịghọ Pro:
Na 16 Disemba 2015, naanị ihe karịrị otu afọ ka ọ sonyeere ndị ntorobịa Wes Ham, Rice bịanyere aka na klọb ọkachamara mbụ ya wee malite igosi maka ndị otu U23 klọb.
Nke a bụ oge ọ malitere imezu ihe ndị ọ rụzuru. Nke mbụ bịara na 10th nke Nọvemba 2017 mgbe Rice meriri onye ọkpụkpọ PL2 nke ọnwa Ọktoba, 2017.
Na Machị 2018, a na-asọpụrụ osikapa na u19 ọkpụkpọ nke afọ. Ihe omume a mere ka ọ nweta akara tiketi ndị okenye.
Mbido mbụ nke Declan maka ndị Hammers mere ya nwoke nke mmeri ahụ. Dị ka ndị ịgba ọsọ;;"Ọ bụ oge dị oke nganga maka mụ na ezinụlọ m. Nnukwu ịhụnanya nye papa m bụ onye bịara n'ụzọ ọ bụla ịbịa lelee, hụ gị n'anya.
N'April 2018, akpọrọ Declan Rice ka ọ bụrụ onye na-agba ọsọ maka nturu ugo nke 2017-18 Hammer nke enyere Marko Arnautović. N'agbanyegh i na enwegh i ya, Riz nwere ihe om um u oz o maka nwa okoro na-ab u af o ruo af o ab uo.
"Abịala m ebe a mgbe Chelsea kwụsịrị na 14 na afọ ise mgbe e mesịrị, m na-egwu West Ham na Premier League," kwuru, sị Rice onye Chelsea tọhapụrụ na 14 afọ.
Ụbọchị Sunday ahụ bụ ụbọchị nro na nke mere ka ezinụlọ Declan Rice nwee obi ụtọ na ọ rụzuru. Riz ji ohere a gosi Chelsea otú ọ dị mma. O kwuru okwu n'osisi ahụ ma nwee obi uto na arụmọrụ ya.
Na 23 December 2018, Riz mere ka 50th ọdịdị West Ham. Ọ ghọrọ onye ọkpụkpọ mbụ na-eme ya mgbe ọ ka nọ n'afọ iri na ụma na-eti ihe Michael Carrick si ndekọ.
Mgbe ọ hụrụ mmasị site na Man City, West Ham kpebiri inye ya nkwekọrịta ọhụrụ ruo n'afọ 2024 na nhọrọ nke afọ ọzọ. Ewere oge ahụ akọwapụtara na vidiyo dị n'okpuru;
Declan Osikapa Ịhụnanya Ndụ:
Choice Rice bụ onye nwere ịhụnanya n'oge ọ dị afọ iri na ụma. O kpebiri ka ya na onye na-eto eto nwee mmekọrịta ya mere ọ na-eme ka ọha mmadụ mara ya ọbụna na mgbasa ozi.
N'adịghị ka ọtụtụ ndị na -agba bọọlụ na -eto eto, ime ka mmekọrịta ọha na eze abụghị ezigbo echiche na -eche na nyocha nke ọha nwere ike imetụta ọrụ ntorobịa ha. Agbanyeghị, nke a abụghị maka Declan Rice onye maralarị ngwaahịa o mejupụtara.
N'azụ kpakpando bọọlụ, enwere ọmarịcha egwu dị n'aha Lauren Fryer onye ya na enyi ya nwoke bụ ọgbọ.
Osikapa bụ ụdị onye hụrụ n'anya nke nwere ike ịbụ enyi enyi ya nwanyị abụ, dee abụ, eserese eserese, na nke kachasị mkpa, mepụta vidiyo egwu ịhụnanya juputara na foto ịhụnanya nke ya na Lauren Fryer. N'okpuru bụ otu n'ime vidiyo dị otú ahụ.
Ndụ Declan Osikapa:
Tupu 28th nke December, 2018, Declan nwetara ube nke nanị £ 3,000-a-izu. Dị ka n'oge ederede, ọ na-enweta £ 30,000-a-izu nke pụtara n'ụzọ nkịtị na mgbanwe nke ndụ.
Eziokwu Odozi Declan Rice:
N'ịbụ onye na-esote ụlọ akwụkwọ dị na West Ham, Declan ghọrọ onye na-adọrọ mmasị na onye na-akwado Pablo Zabaleta bụ onye na-egwuri egwu na Man City n'oge ahụ.
N'ikwu okwu banyere mmasi ya nke Argentine, o kwuru otu oge…; “Abụ m onye na -akwado Pablo na 2014. Site na onye na -akwado ya, aghọrọ m onye otu egwuregwu ibe ya.
Declan Rice Ndụ Onwe Onye:
Mata ụdị ndụ Declan Rice ga - enyere gị aka ịmata onye ọ bụ nke ọma.
Declan bụ onye nwere ọnọdụ nnwere onwe dị n'ime nke nyeere ya aka inwe ọganihu dị ukwuu ma na ndụ nke ya.
N'ịbụ onye ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Chelsea FC wepụtara na Declan echiche na ọzụzụ siri ike nke na -egosipụta ụdị egwuregwu ya ugbu a.
Nyochaa: Daalụ maka ị gụọ akwụkwọ mkpebi Declan Rice na nwata. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ.
Papa Delan, bụ Sean, nwere ike icheta na-egwu egwu na ụlọ ọrụ anyị mgbe ọ bụ 11?
Anyị meriri 'cup' na-egwu na Burton Road Burton Road ochie Kingstonian.
Ntughari, ekele maka isi ihe mgbaru ọsọ mbu gi taa. Ihe mgbaru ọsọ na-agba ọsọ, na ọrụ dị mma dị na kaadị.
(Biko kpọọ maka England). lol.
Na nke a, enwere m aka na papa gị aka na afọ ole na ole gara aga, ọ ga-amasị m ịnweta ya, nwoke na-atọ ọchị nke m zutere n'oge ndụ m.
Ọ bụrụ na ị nwere ike ikwe ka ọ mara na ihe ndị a na-etinye site na phps ụbọchị kachasị mma, enwere m ekele maka ebighi ebi.
Ọ bụghị ihe osisi, m kpọrọ owuwu ọdịda anyanwụ asị, bụrụ onye na-egwu ndụ Lol kpamkpam, naanị na-egwu egwu.
Obi ekele, Les Roberts.